တစ် ဦး ကမှတ်တိုင် Animator မှဂုဏ်ပြု: ရစ်ချတ်ဝီလျံ, အသက် 86 မှာသေ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » ရစ်ချတ်ဝီလျံ, သေမှာ 86: တစ်ဦးက Landmark အန်နီဂုဏ်ပြုခြင်း
ထိုသို့ယနေ့ကျော်ကြားမှတ်တိုင်ကာတွန်းရုပ်ရှင်ကြေငြာ၌ကြီးသောဝမ်းနည်းမှုနှင့်တကွကြွလာ ရစ်ချတ်ဝီလျံ 86 ၏အသက်အရွယ်မှာသေဆုံးခဲ့ပါသည်။ Williams ကတစ်ဦးပါရမီရှင်အသံဖြင့်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးပါရမီရှင်စာရေးဆရာအဖြစ်အကောင်းဆုံးကာတွန်း၌သူ၏အလုပ်အတွက်လူသိများတစ်ခု Uber-ပါရမီဖြစ်ခဲ့သည်။ ကာတွန်းဖို့ဝီလျံရဲ့အသိသာဆုံးပံ့ပိုးမှုများကို၏အတော်များများကကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်ထည့်သွင်း အဆိုပါပန်းရောင် Panther စီးရီးအဆိုပါချစ်စရာကောင်းနှင့်မတူရယ်မိုက်သရုပ်ဆောင် ပတေရုသရောင်းအား, အဆိုပါသူခိုးနှင့် Cobblerသူကတခြားအတူညွှန်ကြားရာ စံနမူနာကာတွန်းအကျင့်ကိုကျင့်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ရစ်ချတ်ဝီလျံအကြောင်းကိုပြောပြီဒါမှမဟုတ်ဖော်ပြထားခြင်းသည်သူ၏အထင်ရှားဆုံးအောင်မြင်မှုတွေတဦးမပါဘဲဂုဏ်ပြုမရနိုငျဟုမပါဘဲသွားနှင့်သောတိုက်ရိုက်အရေးယူ / ကာတွန်းရုပ်ရှင်များအတွက်ကာတွန်းဒါရိုက်တာအဖြစ်မိမိအလုပ်ဖြစ်ပါသည် ရော်ဂျာယုန်ရှုမြင်သုံးသပ်ကြသူကားအဘယ်သူ။ ဤသည်ဂန္ကာတွန်းရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာခဲ့သည် ဖောရက်စ Gump ရဲ့ ရောဘတ် Zemeckisနှင့်ရစ်ချက် Williams ကတစ်ဦးရရှိခဲ့ပြီး အထူးအောင်မြင်မှုအကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့်, အကောင်းဆုံးအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများနှင့်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်တည်းဖြတ်အကောင်းဆုံးအသံကသက်ရောက်မှုအနေဖြင့်အရွယ်ရှိသောသုံးခုယှဉ်ပြိုင်အော်စကာနှင့်အတူ။
ရော်ဂျာရှုမြင်သုံးသပ်ကြသူကားအဘယ်သူ ယုန်ရဲ့ Animation ရဲ့ရန်ပံ့ပိုးမှုများ
ယနေ့တိုင်အောင် ရော်ဂျာယုန်ရှုမြင်သုံးသပ်ကြသူကားအဘယ်သူ အချိန်စမ်းသပ်မှုမဟုတ်ရိုးရှင်းစွာတို့သည်ကြီးစွာသောစုံထောက် / ဟာသရုပ်ရှင်အဖြစ်, ဒါပေမယ့်လည်းတိရစ္ဆာန်အဖြစ်ဝီလျံရဲ့အခွက်တဆယ်၏ opus အဖြစ်ရပ်တည်။ အတူကျွမ်းတဝင်မရှိသောသူတို့အဘို့ ရော်ဂျာယုန်ရှုမြင်သုံးသပ်ကြသူကားအဘယ်သူယခုကြောင့်မဖြစ်နိုင်ပုံရသည်ပင်အားဖြင့်သော်လည်း, ရုပ်ရှင်နှောင်းပိုင်းများကကစားတစ်ဦး LA ကစုံထောက်အပေါ် ဗဟိုပြု. တစ်ခုကာတွန်းဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါသည် ဘော့ Hoskins, ToonTown တစ်စိတ်ကူးယဉ်အတွင်းလူသတ်မှုအလုပ်လုပ်တယ်နှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့သူ Los Angeles မြို့ သာနောက်ထပ်တိရစ္ဆာန်အဖြစ်ဝီလျံ၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အလုပ် encapsulate မှအလုပ်လုပ်တယ်ရာဂန္ကာတွန်းဇာတ်ကောင်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာတွင်ကြောင့်တှငျးသားတို့လူတို့နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဘယ်မှာအသိုင်းအဝိုင်းအဖြစ်အရည်အသွေးမအပေးအယူနှင့်အတူဘဝကိုမှကာတွန်းဇာတ်ကောင်ကိုရောက်စေဖို့လိုအပ်ခြုံငုံတီထွင်ဖန်တီးမှု တိုက်ရိုက်အရေးယူ setting ကိုအတွင်း၎င်းတို့၏ဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်ပေါင်းစည်းမှု၏။ ရော်ဂျာယုန်ရှုမြင်သုံးသပ်ကြသူကားအဘယ်သူ တူဘောင်အတွင်းအားလုံးအတူတူ, ဒစ္စနေးနှင့် Warner Brothers ပါဝင်သည်အရှိဆုံးဂန္ကာတွန်းအချို့ကိုတွေ့လိုသောသည့်အခါစောင့်ကြည့်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောရုပ်ရှင်သာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစကာတွန်းအမှန်တကယ်, တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲ embody နှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ယခုရစ်ချတ်ဝီလျံဆီသို့သော်ငြားကဲ့သို့ခေတ်မီပြီးအဖြစ်အရည်အချင်းစွမ်းဆောင်ရည်အနုပညာရှင်တစ်ဦးအတွက်အဆမဲ့ဖြစ်သက်သေဖြစ်ကြောင်းနယ်နိမိတ်ကိုစိန်ခေါ်နိုင်ပုံကို။ တစ်မူထူးခြားတဲ့သာဓကဖြစ်ပါသည်
Williams ကတော်အမွေအနှစ် မှစ. အဘယျသို့ယနေ့ Animation သင်ယူနိုင်
Animation ရဲ့ရုပ်ရှင်ရုံများ၏အနုပညာပုံစံတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖွယ် application ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်တွေ, ကုမ္ပဏီများကဲ့သို့သော Pixar Animation ရဲ့စတူဒီယို နှင့် Dream Works ရုပ်ရှင် မည်သည့်ကာတွန်းရုပ်ရှင်ကယ်မနှုတ်နိုင်ဆုံးသောကြယ်လျှင်မဟုတ်တီထွင်ခဲ့တယ်ကွပ်မျက်အချို့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်။ ကဲ့သို့သော Masterfully ထွင်းထုအကျင့်ကိုကျင့် Shrek, Nemo ရှာဖွေခြင်း, Kungfu Pandaနှင့် အဆိုပါ Incredible လုပ်ဆောင်ရမှာတွေနှင့်ကာတွန်းများအတွက်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်သစ်ကိုအဆင့်ဆင့်ကိုဦးတည်မြင့်လာမှစီမံခန့်ခွဲပါပြီ။ သူတို့ကရိုက်ကူးသို့မဟုတ်ရုပ်မြင်သံကြား-related, ဖြစ်စေမရှိခြင်းသို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်လွဲမှားပြီးရေးသားရမည်, တစ်ဦးယဉ်ကျေးမှုလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ပစ္စုပ္ပန်တစ်နေ့တာအများအပြားကာတွန်းအကျင့်ကိုကျင့် embody ဖို့လည်းစီမံခန့်ခွဲပါတယ်။ အဲဒီကာတွန်းရန်သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အလှူငွေအဘို့အောက်မေ့ရဟုမည်သူထိုကဲ့သို့သောရစ်ချတ်ဝီလျံအဖြစ်ကာတွန်းရုပ်ရှင်, အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်သူ၏ဇာတ်ကောင်အများအပြားထွက်ရပ်နှင့်တက်အသက်ဝင်စေဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်အတွက်ပါးဟာမူလကပင်အသက်ရှု-ဆည်းပူးနေလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အကြောင်းကိုဟုဆိုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး သူတို့ကိုနောက်ကွယ်ကကာတွန်းမိမိတို့၏ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အသံကိုစိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်လာခဲ့သည်ရှိရာအမှတ်မျက်နှာပြင်။ လက်ရှိတွင်ယနေ့ကာတွန်းထဲမှာအလုပ်လုပ်ကြီးစွာသောအခွက်များစွာကိုအနုပညာရှင်ခြောဖန်တီးမှုနှင့်အမြင်အာရုံ TRANSCEND တစ်မှတ်တိုင်အဖြစ်ကိုကြည့်သင့်ပါတယ်အဖြစ်ရစ်ချတ်နက်ရှိုင်းစွာ, လွဲချော်ပေမယ့်ဘယ်တော့မှမေ့လျော့လိမ့်မည်။
ဒီနက်ရှိုင်းစွာပါရမီဒဏ္ဍာရီအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်, ထို့နောက်ထုတ်စစ်ဆေး: youtu.be/iWAwfXsYMrA
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ကာတွန်း ဘော့ Hoskins ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia အထောက်အပံ့ DreamWorks တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပေါင်းစည်းမှု Pixar ရစ်ချတ်ဝီလျံ ရောဘတ် Zemeckis SJGolden - လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ ရော်ဂျာယုန်ရှုမြင်သုံးသပ်ကြသူကားအဘယ်သူ 2019-08-17
ယခင်: တွဲဖက်ပေး Audio ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး - နွေဦး 2015